जनताको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्था कारबाहीमा ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
जनताको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्था कारबाहीमा !
काठमाडौ। जनताको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
भिबोर सोइसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको उद्घाटन गर्न पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नाफाका लागि खोलिने निजी कम्पनीले जस्तो जनताको पैसामा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामतर्फ सचेत गराउँदै जनताको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कारबाहीमा पर्ने बताए ।
उनले भने, “जनताको रकम बैंकले सुरक्षित गर्नुपर्छ, अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता नै खराब हुन्छ । ” नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ पारितसँगै केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझै सबल भएको भन्दै वित्तीय अनुशासनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।
पछिल्लो समय भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक एकापसमा गाभिएर भिबोभर सोइसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक बनेको छ । हाल बैंकको एक अर्ब ८१ अर्ब पुँजी पुगेको बैंकका कार्यकारी अधिकृत झलक खनालले जानकारी दिए । बैंकले १४ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने ११ अर्ब रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको एक लाख ५० हजार ग्राहक छन् भने विभिन्न ४२ शाखाबाट आधुनिक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७३ भदौ १७